Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Dawbon Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Dawbon
Dawbon Township is located in the southeastern part of Yangon, Myanmar. The township comprises 14 wards and shares borders with Thingangyun township in the north, Mingalar Taung Nyunt township in the west, Thaketa township in the east, and Pazundaung township in the south across the Pazundaung Creek.
Around 1,000 businesses situated in it and total around 9,900 employees working in these respective businesses, total area 3.8 sq km – Density: 19,738/sq km, Total Population 75,325 people living in this township. The township has twelve primary schools, four middle schools and one high school. Postal Code – 11241
Dawbon is connected to downtown Yangon via the Maha Bandoola Bridge. This Bridge isamajor bridge in Yangon, Myanmar built in 2001. The New Thaketa Bridge construction is implemented with the assistance of the Japanese Government. The new bridge is over Pazundaung Creek to link Mingalar Taungnyunt Township with Dawbon Township. The bridge is 4-lane extra-dosed one with 253 meters in length and 20.5 meters in width.
ဒေါပုံမြို့နယ် သည် လူခြေထောက် ဒူးခေါင်းအောက်ပိုင်းပုံနှင့် ဆင်ဆင်တူသော ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ ဒေါပုံမြို့နယ် အမည်တွင်ခဲ့ပုံ ပါးစပ်ရာဇဝင်မှာ ဒဏ္ဍာရီလာ ငမိုးရိပ်မိချောင်းသည် ရန်ဘက်မိချောင်းများကို အရေးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ဒေါသူပုန်ထပြီး ပုန်းခိုခဲ့သော နေရာဖြစ်၍ ဒေါပုံဟု ခေါ်တွင်သည်လည်းကောင်း၊ မြစ်သုံးခုဆိုင်အဝတွင် ရှိသဖြင့် ဒီရေ အတက်အကျ ကြမ်းသည့်အပြင် လှိုင်းလေထန်တတ်သဖြင့် ဒေါပုံဟု ခေါ်တွင်သည်လည်းကောင်း ဆိုကြသည်။
အကျယ်အဝန်း ၁ ဒသမ ၄၇ စတုရန်းမိုင် ရှိသော ဒေါပုံမြို့နယ်သည် ပုဇွန်တောင်ချောင်း တလျှောက်တွင် အရှေ့အရပ်မှ အနောက်အရပ်သို့ လေးမိုင်ခွဲ ရှည်မျောမျော တည်ရှိသဖြင့် ဒီရေအတက်အကျ ရှိသည်။ ချောင်းလက်တက်များ ပေါများသည်။ ရွှံ့နွံ ထူထပ်သည်။
ဒေါပုံမြို့နယ်ကို သာကေတမြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်း၊ ငမိုးရိပ်ချောင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တို့ ဝန်းရံထားသည်။
ဒေါပုံမြို့နယ်ကို ရပ်ကွက် (၁၄)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဗမာအေးရပ်ကွက်၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ထွန်းဇံရပ်ကွက်၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကြည်စုရပ်ကွက်၊ ဆေးစက်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြေရပ်ကွက်၊ ဝါဆိုရပ်ကွက်၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ လမုတန်းရပ်ကွက်၊ ယမုံနာ(၁)နှင့် (၂)ရပ်ကွက်၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ သင်္ဘောကျင်းရပ်ကွက် တို့ဖြစ်သည်။
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ ၎င်းရပ်ကွက်များတွင် အိမ်ခြေ (၉ ၀၀၂)ခု ရှိပြီး နေထိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု (၁၄ ၅၄၂)စု ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် (၇၄ ၉၇၉)ဦး ရှိသည်။
Business Collection Group (BCG) ၏ အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပေါင်း (၁ ၀၀၀)ကျော်ရှိပြီး အများစုမှာ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ လုပ်သားအင်အားစု (၉ ၉၀၀)ဦး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ စက်ရုံအနေဖြင့် အစိုးရပိုင် သင်္ဘောကျင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကောဇောစက်ရုံတို့ ရှိသည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှ ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဆီ အရောင်းဆိုင်နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင်တို့ မရှိပေ။
သောက်သုံးရေအတွက် ရွှေအင်ကြင်း ရေတွန်းစက်ကို သုဝဏ္ဏတံတားအနီးတွင် ထားရှိသည်။
ထင်ရှားသည့် တံတားနှစ်စင်းမှာ မဟာဗန္ဓုလတံတားနှင့် သာကေတတံတားတို့ ဖြစ်သည်။
စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်မှာ ၁၁၂၄၁ ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဟိုတယ် သုံးခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ အခန်း (၈၇)ခန်းပါ စိန်တံခွန်၊ အခန်း (၅၀)ခန်းပါ သီရိစံအိမ်နှင့် အခန်း (၃၀)ပါ ရွိုင်ရယ်ဘော့စ်တို့ ဖြစ်သည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် မူလတန်းကြိုကျောင်း (၁)ခု၊ မူလတန်းကျောင်း (၁၂)ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၄)ခု၊ အထက်တန်းကျောင်း (၁)ခု ရှိသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မိုးသီးအထူးကုဆေးခန်းသည် (၁၆)ကုတင်ဆန့် ဆေးရုံငယ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူသိများသည်။
ထင်ရှားသည့် အပန်းဖြေပန်းခြံမှာ ရှုခင်းသာအပန်းဖြေစခန်း ဖြစ်သည်။ Yangon Waterboom တည်ရှိရာ မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ဈေးများမှာ စည်ပင်ပိုင် ဈေးများဖြစ်ကြသည့် ဒေါပုံဈေး၊ နဝရတ်ဈေး၊ ထွန်းဇံဈေး၊ ရတနာဈေး တို့ဖြစ်သည်။ ကုန်တိုက်အနေဖြင့် Capital Hypermart ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
Eastern Yangon District Court
The New Thaketa Bridge
Dawbon Demographic & Economic Activities
Total Population 75,325 *
Area (km2) 3.8**
Population Density (persons per km2) 19738.3 persons
Population In Conventional HouseHolds 72,683 72,683
Number Of Convetional Households 14,409 14,409
•In Dawbon Township, there are more females than males with 95 males per 100 females.
•The population density of Dawbon Township is 19,738 persons per square kilometre.
•There are 5.0 persons living in each household in Dawbon Township. This is slightly higher than that of Union average.
Productions 13 854
Retails 442 3065
Wholesales51084
Services 481 4765
Trading4136
All about Dawbon
: U Htay Win Aung
: +95973247973
: U Han Soe
: +9599730 33035
: U Thant Zin
: +9595128 015
Address : 11, Min Nandar Rd., Nwe Aye Ward,
Phones : 09-254389882, 09-254389883, 09-254389884, 09-254389885